गाजा र भाङबाट गरिने आयुर्वेदिक उपचार Nepalpatra गाजा र भाङबाट गरिने आयुर्वेदिक उपचार
गाजा र भाङबाट गरिने आयुर्वेदिक उपचार । गाजा, भांग र चरसको बानीले शरीरलाई नोक्सान गर्न सक्छ । धार्मिक मान्यता अनुसार भगवान शिवलाई यो चढाइन्छ । मानव स्वास्थ्यमा यदि यसको सहि डोजमा खुवाउन सके खतरनाक रोगबाट समेत बचाउन सकिनेछ । भांगलाई अंग्रेजीमा कैनाबीस, मेरिजुआना, वीड आदि नामले चिनिने गर्दछ । यो नेपाल र भारतमा बढी हुने गरेको पाइन्छ । यो लागु पदार्थको रूपमा लिने गरेको र नेपालमा प्रतिबन्धित बस्तु अन्तर्गत पर्दछ ।
गाजामा टेट्राहाइड्रोकार्बनबिनोल पाइन्छ भने यसलाई छोटो शब्दमा टीएचसी नामले पनि पुकार्न सकिन्छ । भाङ गाजालाई आयुर्वेदिकमा ठूलो औषधि मानेको छ । कुनै पनि बस्तुलाई बढी प्रयोग गरिन्छ भने त्यसले नोक्सान गर्न सक्छ । आउनुस यसको प्रयोबाट के कस्ता रोग निको पार्न सकिन्छ जानौं । गाजा, भाङ र चरेसका ५ फाइदाहरु यस्ता छन् :
१. २०१३ मा वर्जीनियाको कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटीमा गरिएको रिसर्च अनुसार गाजामा पाइने एक प्रकारको तत्वले एपिलेप्सी भन्ने रोगको Attack लाई रोक्ने क्षमता यसमा छ भनेको छ । यो कुरा साइन्स पत्रिकामा पनि छापेको छ ।
२. Glaucoma यो जडिबुटीले राम्रो फाइदा गर्दछ । अमेरिकाको नेशनल आई इंस्टीट्यूटको भनाइमा गाजाको सेवनले यो रोग निको हुन सक्ने कुरा उल्लेख गरेको छ ।
३. अल्जाइमर संग सम्बन्धित पत्रिकामा छापेको शोध अनुसार भागमा पाइने टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉलको सानो मात्रा सेवन गराउनाले अल्जाइमर जस्ता रोग निको हुने बताएको छ ।
५. थुप्रै शोध अनुसार कीमोथैरेपीको साइड इफेक्टलाई समेत यसले फाल्ने काम गर्दछ । कीमथोरैपीको साइड इफेक्टकपमा नाकबाट पानी बग्नु, उल्टि हुनु, भोक नलाग्नु जस्ता समस्या देखिने गर्दछ । अमेरिकामा एफडीए विभागले यस्ता विरामीलाई गाजाको सानो मात्रा दिन मन्जुरी गरेको थियो भनेर उल्लेख गरेको छ ।
#गाजा र भाङ